Fiaran’ny Polisy Filipiana Manitsaka Amin-kerisetra Ireo Indizena sy Vitsy An’isa Mpanao Fihetsiketsehana Mitaky ny Zony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Novambra 2016 14:05 GMT
Pikantsary avy amin'ny lahatsary mampiseho ilay fiaran'ny polisy manosy ireo mpanao hetsi-panoherana.
Voarakitra ao anaty lahatsary iray miely be tokoa amin'izao fotoana izao, imbetsaka ny fiaran'ny polisy no tratra niverimberina nanosy sy nanitsaka ireo vahoaka indizena mpanao hetsi-panoherana ary ireo vondrona vitsy an'isa ao amin'ny firenena nifamory hanao hetsika ny 19 Oktobra maraina teo anoloan'ny Masoivohon'i Etazonia ao Manila.
Hetsika tafiditra amin'ilay Pambansang Lakbayan ng mga Pambansang Minorya (Diabe Nasionalin'ireo Vitsy An'Isa ao amin'ny Firenana) misy amin'izao fotoana izao, izay nahitàna vahoaka indizena 3.000 tonga tao amin'ny renivohitr'i Filipina mba hisarika ny saina hijery ireo fanitsakitsahana zon'olombelona sy fandrakofana miaramila tafahoatra ny tany navalen'ny razan'izy ireo. Ny fanesorana ireo andian-tafika any anatin'ny vondrom-piarahamonin-dry zareo no takian'ireo vitsy an'isa ao amin'ny firenena ireo, ary ny fandravàna ireo andianà milisy tohanan'ny fanjakana.
Amin'ny ampahany, ilay fihetsiketsehana dia natao hanehoana firaisankina sy fanohanana ny Filoha Rodrigo Roa Duterte amin'ny fikisahany niala tamin'ilay fifandraisana mitanila efa naharitra am-polo taona maro niarahana tamin'i Etazonia, izay lazain'ireo vondrona indizena fa nitondra ireo orinasa vahiny mpitrandraka harena ankibon'ny tany sy mpanao voly midadasika hanao ny tanin'ny razan-dry zareo ho toy ny fanariana fako.
Saingy raha tokony ho fandevenana ny herisetra no hita tao amin'ny renivohitry ny firenena, herisetra no valin'ny diabe am-pilaminana nataon'izy ireo ho any amin'ny masoivoho amerikàna, satria tamin-kerisetra no nanaparitahan'ny polisy ilay hetsi-panoherana amin'ny entona sy kibay raha iny efa hifarana iny indrindra ilay izy.
Avy eo, Franklin Kho, manamboninahitry ny polisy grady faha 3, no niverimberina nitondra ny fiarany nanitsy ireo andianà mpanao hetsi-panoherana ary nanosy vahoaka indizena sy mpikatroka maro.
Ireto misy lahatsary telo bolongany be nalain'ny Ligy Iraisampirenen'ny Tolon'ny Vahoaka, sy Barry Dacanay ary ny Mayday Media mampiseho io tranga io avy aminà zoro samihafa :
Nolazain'ireo mpanao hetsi-panoherana fa baikon’i Marcelino Pedrozo Jr. mpifehy ambony ao amin'ny Polisin'ny Distrikan'i Manila ilay fanaparitahana tamin-kerisetra, na nandà imasom-bahoaka ho tsy nanome baiko tamin'ilay hetsika aza i Pedrozo. Iray hafa mpitondra tenin'ny polisy ihany koa no nandà hoe tsy nisy na iray aza fiaran'ny polisy nanosy mpanao fihetsiketsehana.
Na izany aza, azon'ny fakàntsary i Pedrozo niteny tamin'ny olony hanaparitaka ireo mpanao hetsi-panoherana sy handranitra azy ireo mihitsy raha ilaina, tamin'ny filazàna fa henatra ny fanaovan'ireo mpanao hetsika azy io eo akaikin'ny masoivohon'i Etazonia :
Tsy nisambotra olona akory ianareo na iray aza, marobe ry zareo no teny… Aleo hisy fandranitana raha ilaina, isika no polisy eto. Hanaiky hovelesin'ireo mpanao hetsi-panoherana ireo ve isika? Endrika manao ahoana no ho asehontsika ny masoivoho? Noho izany aparitaho izao dieny izao ireo! Polisy ianareo nahoana ianareo no tsy miady!
Niharan'ny herisetran'ireo polisy ihany koa ny mpamily jeepney iray ratsy vintana nampiasain'ireo mpanao hetsi-panoherana, nahatonga azy ho vaky rà teo amin'ny arabe taorian'ny daroka imbetsaka teny amin'ny lohany :
Voatsenan'ny tafondron-drano sy andrana fanaparitahana tamin-kerisetra ny ezaka iray nataon'ireo vitsy an'isa ao amin'ny firenena mba hitondra ny momba azy ireo any amin'ny Foiben-toeran'ny Tafika Mitampiadiana ao Filipina, any akaikin'ny tanànan'i Quezon tamin'ny 18 Oktobra — andro iray talohan'ilay hetsi-panoherana tao Manila.
Misy vovonana iray vaovao vao naorin'ireo vitsy an'isa ao amin'ny firenena, antsoina hoe Sandugo, niteraka ny hetsi-panoherana tao an-tanànan'i Quezon, nanameloka ny herisetran'ny polisy sy ny tsy rariny tafahoatra manjo ireo vahoaka indizena manao hetsi-panoherana. Niantso ny fanjakàna ihany koa ry zareo mba hitazona ireo manampahefana ao amin'ny polisy ho tomponandraikitra tamin'ilay famonoana olona.
Iverenana ny ao Manila, nandratra olona 50 ilay fanaparitahana tamin-kerisetra, ary 10 raha kely indrindra ireo olona nalefa notsaboina tao amin'ny hopitaly tsy lavitra teo noho ny ratra mafy nanjo azy. Raha kely indrindra dia 29 koa ireo mpanao hetsi-panoherana nosamborina, misy naratra ny sasany amin'izy ireny. Navotsotra ry zareo taorian'ny nanaovan'ireo mpanao hetsi-panoherana fihetsiketsehana teo anoloan'ny foiben-toeran'ny polisy.
Ity ny lahatsary iray ahitàna ny mpitarika ireo indizena sy mpitondra tenin'ny Sandugo, Piya Macliing Malayao, iray amin'ireo voadonan'ilay fiaran'ny polisy, avy amin'ilay vondrona tsy miankina mpamokatra lahatsary Tudla Productions:
Efa teo am-pamaranana ary hiparitaka izahay. Niandry fotsiny izay hahataperan'ny kabarin'ilay farany nandray fitenenana. Fa nihetsika nandroso ny polisy ary nandroso nihemotra aza ny iray tamin'ny fiaran'izy ireo. Izany no anton'ireo ratrako. Ary ankehitriny raha tokony hahazoako fitsaboana vonjy taitra avy amin'ireo namako ao anatin'ny tariky ny mpitsabo….nosamborin'ny polisy tamin-kerisetra ry zareo. Ho vaoheloka daholo izahay rehetra, hoy ny polisy. Vesatra inona? Fiarovana ny fiandrianan'i Filipina. Tonga eto izahay hanao hetsi-panoherana hisian'ny politika ivelany tsy miankin-doha ary hamarana ny vahohon'ny imperialisman'i Etazonia amin'i Filipina. Efa ela niainana tanaty herisetra sy fandrobàna ny vahoaka Filipiana noho ny fifehezan'ny imperialisman'i Etazonia sy ireo politika liberaly amin'ny endriny vaovao tereny ampiharina eto amin'ny firenena, ireo toby famaharan'i Etazonia sy ny andian-tafika Amerikàna izay misy eto. io no toherinay fony izahay niharan'ny fanafihana feno herisetran'ny polisy.
Dulping Ogan, sekretera jeneralin'ny vovonana Kalumarana iraisan'ireo vahoaka indizena ao Mindanao, nilaza fa ilay fanaparitahana tamin-keriseha dia mampiseho ny fitohizan'ny tandindon'i Etazonia ao amin'ny firenena, miaraka amin'ny fanirian'ny polisy hamely ireo vitsy an'isa ao amin'ny firenena mba hihatahan'ireo mpanao hetsi-panoherana lavitra ny masoivoho :
Tao Manila, tafondron-drano no nitsena ny fitakianay, dia ankehitriny entona mandatsa-dranomaso sy herisetra. Tany anatin'ny vondrom-piarahamonina nentindrazanay, zavatra faran'izay ratsy ny famelezana: fantatray rehetra ny momba ireo tranganà famonoana olona niverimberina natao tamin'ireo havanay akaiky. Any amin'izay rehetra alehanay, anaovana herisetra izahay Lumads sy ireo vitsy an'isa hafa eto amin'ny firenena. Kanefa mitohy mihantsy hatrany izahay.
Ny Filoha Duterte, izay mbola tany am-pitsidihana ofisialy an'i Shina (fanamarihan'ny mpandika : 20 Okt ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy niaingàna), ao anatin'ny hetsika ataony hitrandrahana politika ivelany tsy miankindoha kokoa, dia nampanantena fanadihadiana ilay tranga ary hanao fanambaràna ofisialy rehefa miverina ny 21 Oktobra. Noroahana tamin'ny asany ireo manamboninahitra sivy tao amin'ny polisy voarohirohy tamin'ilay fanaparitahana nisy rà nandriaka.
Indrisy fa tsy zavatra vaovao ny fomba fitondra ratsy ampiharina amin'ireo olona tsy omena fahalalahana ao Filipina. Tany ampiandohan'ity taona ity, tamin-kerisetra no nanaparitahan'ny polisy ireo tantsaha nitaky vary tao Kidapawan, Mindanao. Ary ho afindra toerana ireo vahoaka indizena tao Tumandok tao amin'ny nosy Panay noho ny asa fanorenana tohodrano gaovana be iray.
Tamin'ny taona lasa, nikarakara valalamanjohy tao Manila koa ireo vahoaka indizena Lumad avy any Mindanao mba hiresahana ny fanararaotana manjo azy ireo. Afaka jerena eto ambany ny lahatsary momba ny dian-dry zareo :
Tamin'ity taona ity dia tao amin'ny toeram-ponenan'ny mpianatra ao Diliman, Oniversite-n'i Filipina no nampiantranoina ireo vahoaka indizena sy ireo vondrona vitsy an'isa ao amin'ny firenena izay ao anatin'ny Lakbayan ivondronan'ireo Vitsy An'Isa ao amin'ny firenena .